Muhammad - Sword sword sy Crown
Muhammad - Mpanorina ny finoana silamo
I Muhammad dia inoan'ny Silamo ho ny farany sy lehibe indrindra amin'ny mpaminany. Heverina fa nitondra ny fanambarana feno sy farany avy tamin'Andriamanitra ho an'ny olona izy. Ny fanambarana nataony dia heverina ho mihoatra ny fanambarana sy fivavahana hafa rehetra. Mampianatra ny finoana silamo fa ny mpaminany dia tsy maintsy tsy misy ota, na afaka amin'ny ota lehibe rehetra. Ny hafatr'i Muhammad dia heverina ho voatahiry tsy misy hadisoana. I Muhammad mihitsy no nilaza fa nanohana an'i Abrahama, i Mosesy ary i Jesosy ho mpaminanin 'Andriamanitra.
Mino ny silamo fa ny Testamenta Taloha sy Vaovao dia ahitana faminaniana momba an'i Muhammad. Mino izy ireo fa ny toetran'ny antsony mba ho mpaminany dia mahagaga. Heverin'izy ireo fa tsy mitovitovy amin'ny fiteniny sy ny fampianarana ny CORAN. Mino ny silamo fa nanao fahagagana i Mohammed, ary ny fiainany sy ny toetrany dia manaporofo fa izy no farany sy lehibe indrindra amin'ny mpaminany rehetra.
Ao amin'ny Deoteronomia 18: 15-18 dia nampanantena an'i Mosesy Andriamanitra fa hanangana Mpaminany ho an'ny Isiraely izy. Mazava fa io Mpaminany nampanantenaina io dia tokony ho Isiraelita. I Mohammed dia naterak'i Ismaela fa tsy avy amin'i Isaka. Nilaza Andriamanitra fa hametraka ny fanekeny amin'i Isaka Izy (Gen. 17:21). Jesosy no Mpaminany noresahin'Andriamanitra tamin'i Mosesy ao amin'ny Deoteronomia. Amin'ny maha Zanak'Andriamanitra dia Mpaminany sy Mpisorona i Jesosy.Hebreo 7-10) sy Mpanjaka (Apôk. 19-20).
Araka ny fieken-keloka nataon'i Muhammad manokana dia tsy nanao famantarana sy fahagagana toa an'i Mosesy sy Jesosy izy (Sura 2: 118; 3: 183) Tsy nilaza ny hifanatri-tava amin'Andriamanitra mihitsy i Muhammad, fa nilaza izy fa nahazo fanambarana tamin'ny alàlan'ny anjely iray. Jesosy dia mpanalalana mivantana an'Andriamanitra. Ny silamo sasany dia milaza fa i Mohammed dia voambara mialoha ao amin'ny Salamo 45: 3-5 ho toy ny iray izay hiaraka amin'ny sabatra handresy ny fahavalony, fa ireo andinin-tsoratra masina ireo dia momba an'Andriamanitra, ary i Mohammed dia tsy nilaza ho Andriamanitra velively, fa i Jesosy kosa. Jesosy dia tonga tety an-tany voalohany nanolotra ny fiainany ho fanavotana ny olona, ​​fa ho avy Fanindroany kosa Izy.
Ireo manam-pahaizana silamo dia mahita ny filazan'i Jesosy ny amin'ny Mpanampy ho avy ho faminaniana mialoha an'i Muhammad. Na izany aza, Jesosy dia nanondro mazava tsara ilay Mpanampy ho Fanahiny Masina fa tsy Muhammad. Nandritra ny fiantsoana azy ho mpaminany dia nanambara i Muhammad fa 'nokendain'ny' anjely nampita ny hafatra taminy ... 'Nokireniny aho tamin'ny lamba mandra-pinoako fa ho faty aho. Navotsony aho avy eo ary hoy izy: 'Mitoria.' Mino aloha i Muhammad fa voafitaky fanahy ratsy izy. Natahotra mafy an'ilay anjely izy mandra-pahatonga ny vadiny sy ny zanak'olo-mpianadahy taminy hamporisika azy hino fa toa an'i Mosesy izy ary ho mpamin'ny fireneny. Nandritra ny fandraisana ireo fanambarana ireo dia niditra an-tsokosoko i Muhammad.
Nahazo fanambarana vitsivitsy momba ny fivavahana amin'ny sampy i Muhammad, saingy taty aoriana dia novainy ireo fanambarana ireo. Betsaka ny olona mino fa ny fanambarana nataony dia namboarina avy amin'ny loharanom-baovao jiosy, kristianina ary mpanompo sampy isan-karazany. Na dia betsaka aza ny tantaran'ny fahagagana Muhammad ao amin'ny finoana Silamo, ny soratra ao amin'ny CORAN 6: 35 dia tsy milaza fa afaka nanao fahagagana i Muhammad. Izao no voalaza: 'Raha mafy aminao ny manaratsy azy, na dia afaka mitady tonelina amin'ny tany ianao na tohatra mankany an-danitra ka mitondra famantarana ho azy ireo, (inona no soa?). Ny soratra dia tsy milaza hoe 'mahay ianao', fa 'raha mahay ianao.'
Na dia nilaza aza i Muhammad fa nahazo fanambarana fa ny lehilahy dia mety manana vadin'ny efatra, dia izy irery no manana. Nohamafisin'i Muhammad ny daroka nataon'ny ankizivavy iray mba ahafahany milaza ny marina. Nambarany fa tsy maninona raha Andriamanitra (Allah) no mamono ny vadiny. Ny fanambarana nataony koa dia ny fitakiana ny vehivavy manao voaly, hijoro ao ambadiky ny vadiny ary mandohalika ao aorian'ny vavaka. Ny lalàna silamo dia tsy mamela ny vehivavy hitady fisaraham-panambadiana, fa mamela lehilahy iray hanao izany. Mikasika ny fifanarahana sivily dia mitovy amin'ny fijoroan'ny lehilahy iray ny fijoroan'ny vavolombelona roa vehivavy.
Muhammad dia nanamarina ny famonoana tamin'ny jihad, na ady masina. Nozain'i Muhammad ny fanafihana sy ny fandrobàna ireo karazan-dàlana ara-barotra. Nilaza koa izy fa tsara ny mandainga amin'ny fahavalonao. Nanaiky ny fiampangana an'ireo izay naneso na nanakiana azy izy. Silamo maro no mino fa nanana toetra tsara i Muhammad nefa na izany aza dia misy porofo be loatra fa tsy marina izany. (Geisler sy Saleeb 146-176)
Geisler, Norman L., ary Abdul Saleeb. Mamaly Silamo: Ny hazavan'ny hazofijaliana. Grand Rapids: Baker Boky, 1993.